Janata Live | Janatalive is Best Online Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, Blogs and other news from Nepal. राेचक खबर – Page4– Janata Live
काठमाडौं– पुरातन नेपाली समाजमा मात्र होइन भारतीय र पश्चिमा समाजमा पनि सासु बुहारीको बेमेल सामान्य कुरा थियो । तर अहिले त्यसमा परिवर्तन आएको छ । सासु र बुहारीबीचको सम्बन्ध पछिल्लो समयमा सुधार आएको पाउन सकिन्छ । तर सासू बुहारीबीचको सम्बन्ध छोरी र आमाको जस्तो भने बन्न सकेको छैन । नेपाली समाजका धेरै परिवारमा अहिले पनि सासू र बुहारीबीचको सम्बन्ध राम्रो बन्न सकेका पाइँदैन । कुनै घरमा सासूका कारण त कुनै घरमा बुहारीका कारण समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । सासूले बुहारीमाथि हैकम जमाउन खोज्ने र बुहारीले सासूको मानमर्दन र वेवास्ता गर्नाले समस्या निम्तने गरेको छ । घर परिवारलाई राम्रोसँग चलाउनु...
यि मनकारी पति जसले पत्निका प्रेमीसँग पत्निको विबाह गरिदिए, फिल्ममा जस्तो दृश्य वास्तविक जीवनमा पनि देखियो
काठमाडौँ – फिल्ममा हिरोले प्रेमीकाको अन्त विबाह भएको र पछि मिलन भएको दृश्य देखिन्छ । वास्तविक जीवनमा भने असम्भव जस्तो यो दृश्य भारतको विहारमा देखिएको छ । जहाँ एक महिलाका पतिले आफ्नी पत्निको विबाह उनका प्रेमीसँग गराइदिएर त्यागी पति बनेर उदाहरणीय काम गरेका छन् । विहारको छपरा नगरका एक पुरुषले आफ्नी पत्निको धुमधामले प्रेमीसँग विबाह गरिदिन्छन् । अन्य विबाहमा जस्तो मानिसहरुको घुइचो नै लाग्छ । विबाहमा गएका धेरैलाई थाहा हुँदैन की यो विबाहमा एक पतिले आफ्नी पत्निको उनका प्रेमीसँग विबाह गरिदिँदैछन् भन्ने कुरा । जब उपस्थित पाहुनाले थाहा पाउँछन् त्यतिबेला सबै चकित पर्छन् । विबाह सम्पन्न भइसकेपति ति बेहुलीले आफ्ना...
जापानमा विशाल बाैद्ध प्रतिमालाई ‘फेस मास्क’ (भिडियाेसहित)
जापानमा दयाकी देवी कन्ननकाे विशाल प्रतिमाको मुखमा मास्क लगाइएको छ । कन्ननप्रति समर्पित ५७ मिटर (एक सय ८७) फीटको बौद्ध प्रतिमाको मुखमा मास्क लगाइएको हो । प्रतिमाको मुखमा ४ दशमलव १ बाई ५ दशमलव ३ मिटर लामो ३५ किलो तौलको मास्क लगाइएको छ । यो मास्क लगाउन चार कर्मचारीलाई तीन घण्टा लागेको खबरमा उल्लेख छ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण नभएसम्म प्रतिमामा लगाइएको मास्क नखोलिने स्थानीय अधिकारीहरूलाई उदृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ । मूर्तिमा रहेकी देवीले एक बच्चालाई लिएर उभिएकी छिन् । त्यहाँ बच्चा सुरक्षित जन्मियोस् भन्ने कामना गर्ने गरिन्छ भने आफ्नो नवजात शिशुका लागि आशीर्वाद माग्नेहरूको पनि भिड लाग्ने...
अहिले विश्वमै को’रोना महामारीविरुद्ध खोप लगाउने अभियान चलिरहेको छ । नेपालमा पनि भाइरसवि’रुद्धको खोप अभियान जारी छ ।खोप लगाएपछि कसैलाई ज्वरो आउने, कसैलाई शरीर दुख्ने त कसैलाई कमजोरी महसुस हुने सुनिँदै आएको छ । तर केही समयअघि भारतका एक व्यक्तिको शरीर खोप लगाएपछि चुम्बक बनेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । नेपालमा पनि त्यस्तै घटना भएको छ ।४ दिन अघि मात्रै भे’रोसेलको पहिलो डो’ज खोप लगाएकी असनकी ६० वर्षकी संगिता तिमिलाको शरीर चु’म्बक जस्तै भएको छ । मध्यपुर हस्पिटल तथा कोरियन नेपाल अस्पतालका अ’र्थोपेडिक सर्जन डा. मनिष प्रधानाङ्गले आफ्नी फुपु संगिताको शरीर चु’म्बकजस्तै भएको बताउँदै फेसबुकमा भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् ।चुम्बकले...
यी कुकुरको इमान्दारीता र दिमाग देखेर तपाईं छक्क पर्नुहुनेछ
वर्षभरि तपाईं र घरको रक्षा गर्ने यी माया`लाग्दा प्राणीलाई तिहारको दोस्रो दिन विशेष सत्कार गरिन्छ। हिन्दु धर्मकथाअनुसार भैरवको बहान मानिने कुकुरलाई हाम्रा महाकाव्यहरूमा पनि उत्तिकै स्थान दिइएको छ। ती महाकाव्यलाई ध्यान दिएर पढ्ने हो भने कु`कुर र देवता बीचको मित्रता प्रष्टै झल्किन्छ। यो निकट मित्रता आज पनि संसारभर का`यम छ। घरको रक्षा गर्नु, चोरबाट खबरदारी गर्नु, प्रहरीलाई अपराधी पत्ता लगा`उन सघाउनु र मान्छेको भावना महशुस गर्न सक्नु कुकुरको मुख्य खुबी हो। यसले मान्छे र कुकुरबी`चको भाव`नात्मक सम्बन्ध झनै बलियो बनाएको छ। कामले थकित भएर घ`र फर्कँदा तिनका चम्कि`ला आँखा आफ्नो पर्खाइमा बसिरहेको हेर्ने चाह`ना कसको नहोला? आफू दुःखी हुँदा तिनका...
काठमाडौ- हालै सामाजिक संजालमा एक बच्चाको तस्विर भाइरल भएको छ । भाइरल भएको उक्त तस्विर शेयर गरेको केहि घण्टामै धेरैले हेरिसकेका छन् । लन्डनमा २३ दिन अघि जन्मीएकी एक बच्चीले २ जनालाई नयाँ जिन्दगी दिएकी छिन् । जन्मेको दिनमै मुटु रोगि भएकी उक्त बच्चीलाई अस्पतालमा डाक्टरले पनि बाच्ने आशा मारिसकेका थिए । उनि बाच्ने आशा कमै भएपछि बच्चिका बाबुलाई यो कुरा जानकारी गराए । त्यसपछि बाबु आमाले उनको अंगदान गर्ने निधोमा पुगे र त्यसपछि उनको मिर्गोला दुई व्यक्तिलाई दिएको बताइएको छ । सानै उमेरमा अंग दान गर्ने उनि बिश्वकै पहिलो डोनर भएकी छिन् । उनको अहिले मिर्गौला ट्रान्सप्लान्ट गरीसकेका छन्...
भारतमा टिकटकसहित ५९ वटा मोबाइल एपमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर देखिन थालेको छ । सामाजिक संजालमार्फत व्यवसाय गरिरहेका र लोकप्रियता हासिल गरेका प्रयोगकर्ताहरुलाई तनाव भएको छ । यसै सिलसिलमा भारतमा टिकटिक मार्फत चर्चा कमाएकी नेपाली मूलकी युवती निशा गुरागाँइलाई टिकटक प्रतिबन्धले ठूलो घाटा पुर्‍याएको छ । बलिउड स्टारकै तुलनामा आफ्नो छबी बनाउँदै गएकी निशाका २ करोड ७९ लाख बढी फलोअर्स छन् । भारतमा उनी सबैभन्दा बढी फलोअर्स भएको टिक टक प्रयोगकर्तामा तेस्रो नम्बरमा पर्छिन् । २३ बर्षीया निशाले टिकटकमार्फत लोकप्रियता मात्र होइन राम्रो आम्दानी पनि गर्दै आएकी थिइन । एन्जल निशुको उपनामले चर्चित उनलाई टिकटक प्रतिबन्धले तनाव गराएको छ...
बिहे गर्ने एउटा पनि केटा नपाएपछि, ६ सय केटीहरुले सामूहिक रुपमा केटा पाउँ भन्दै गुहार मागे
उमेर ढल्किँदै जाँदा बिहे गर्ने एउटा पनि केटा नपाएपछि सहर भरिका केटीहरुले सामूहिक रुपमा केटा पाउँ भन्दै गुहार मागेका छन् । यो ब्राजिलको घटना हो । ब्राजिलको नोइभा डो कोर्डेरियो सहरमा एक जना पनि अविवाहित पुरुष छैनन् । तर, ६ सय जना अविवाहित महिला छन् । ती मध्ये अधिकांस ३५ वर्ष मुनिका तरुनी छन् । महिलाले नै भरिएको त्यो सहरमा महिलाकै बोलवाला छ । तर, भएर के गर्नु ? पुरुष नपाएर अविवाहित महिला छटपटाउन थालेका छन् । उनीहरुले हालै एक सामूहिक अपिल गरेका छन् अविवाहित केटाहरुलाई आफुसँग सम्बन्ध गाँस्न अनुरोध गर्दै । ब्राजिलको यो सहर मात्र होइन रुसमा पनि हालत...
काठमाडौं– एलियनसँग सम्बन्धित कैयौं घटना हामीले सुन्ने गरेका छौं । हालै अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा र अन्य अमेरिकी विशेषज्ञहरुले पनि युएफओ देखेको घटनाका पुष्टि गरेपछि यो विषय थप चर्चामा छ । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले पनि युएफओसँग सम्बन्धित एक रिपोर्ट छिटै सार्वजनिक गर्दैछ । तर, यही समयमा एक भौतिक विज्ञानीले भने एलियनसँग सम्पर्क गर्ने विषयमा नयाँ चेतावनी दिएका छन् । भौतिक विज्ञानी मार्क बुकाननका अनुसार यदि एलियन छन् भने तिनीहरुसँग गरिने सम्पर्कले पृथ्वीमा जीवन समाप्त पार्न सक्छ । डेलीस्टारको एक रिपोर्टअनुसार भौतिक विज्ञानी मार्क बुकाननले चेतावनी दिँदै अन्य ग्रहका प्राणीहरुसँग सम्पर्क नगर्न भनेका छन् । पछिल्लो समय अन्य ग्रहका प्राणहिरुसँग...